Maitiro ekuwedzera Spanish media kune yedu Apple News | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera midhiya yeSpanish kuApple News yedu
Sezvo vazhinji venyu vatoziva kare, kwasara zvishoma kudarika mwedzi kuti kuuya kwepamutemo kweIOS 9 uye chimwe chezvinhu zvitsva izvo chichaunza nacho chikumbiro chatinogona kuverenga nacho nhau. Apple News ine yekutsvagisa midhiya system, asi zvinenge zvese zviri muChirungu, izvo zvisingashande ruzhinji rweva iPhone News vaverengi. Kune vazhinji vashandisi vane hanya zvishoma nezvekuti zvemukati hazviwanikwe mumutauro wedu, asi rimwe remabasa akanakisa eApple Nhau nderekuti rinotibvumidza kuti tiwedzere chero blog uye nhau portal kubva kuSafari.
Hazvisati zvazivikanwa kana Apple News ichave ichiwanikwa kune dzimwe nyika kunze kweUnited States panguva imwechete iyo iOS 9 inosunungurwa, saka iwe uchafanirwa kuita hunyengeri kugona kuwana iko kunyorera uye nekudaro kukwanisa kuponesa edu epamoyo midhiya kubva pairi. Iyo yakapusa maitiro uye haina kuchinja chero chinhu muhurongwa. Ndakazviita kubvira yekutanga beta yeIOS 9 uye ini handina chandamboona zvachose.
1 Maitiro Ekuwana Apple News Kunze kweUnited States
2 Maitiro ekuwedzera midhiya yeSpanish kuApple News
Maitiro Ekuwana Apple News Kunze kweUnited States
Sezvo Apple News isingawanikwe kunze kweUS panguva ino, isu tichafanirwa kushandura dunhu redu. Kuti tiite izvi, tichaita zvinotevera:
Isu tinoenda kuZvirongwa / General / Mutauro uye dunhu / DZIMWE MAFOMATSI / Dunhu uye tinosarudza United States.
Isu tinodzokera uye muZuva nenguva isu tinoshandisa 24 yemaawa wachi kana tichishuva (iyo fomati yenguva inochinja patinoshandura ndima kuenda kuUS).
Kana isu tikasaona kunyorera pane iyo Springboard, tinodzima uyezve zvakare iyo iPhone / iPod kana iPad.
Maitiro ekuwedzera midhiya yeSpanish kuApple News
Isu tinopinda pawebhu iyo yatinoda kuwedzera kuApple News.
Takatamba pa share (
Isu tinotsvaga iyo icon yeiyo nhau app uye tinotamba pairi. Kana isina kuwedzerwa, isu tinotanga taedza kuisa iyo desktop desktop yewebhu (mune yangu, iri padhuze neiyo yekuwedzera kuNhau).
Iye zvino tinovhura Apple News uye tione kuti svikiro rakawedzerwa.
Sezvauri kuona, mazhinji midhiya atichawedzera haazove nechero mufananidzo, zvirinani kusvikira zvanyatsoenderana nevese vezvenhau kana isu titumire chikumbiro kuna Apple kutisanganisira muApple News. Zvisinei, ini ndawedzera tekinoroji midhiya inondinakidza, kusara kweimwe. Ingori nyaya yenguva usati wawedzera iyo yepakati zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwedzera midhiya yeSpanish kuApple News yedu
Pablo, kana tikadaro, inogadzirirwa sei iyo US, iyo App Store nezvimwe zvinosanganirana neUS here kana kuti haina chekuita nazvo ...?
Kwaziso uye chinyorwa chakanaka, ini ndakanga ndisina zano
Mhoro Rafael. Izvo hazvichinje chero chinhu kana iwe hapana chaunozoona. Iyo App Store, iTunes, iCloud uye zvese zvakagadziriswa neApple ID yako uye zvinoshanda zvichienderana nekwawakasika, mune ino Spain. Ini ndinofunga nzvimbo yacho inogadzirisirawo Chirungu iwe pamwe neSpanish uye inowedzera iyo keyboard, asi ikozvino handina chokwadi nazvo (kana ukazviedza, unozvisimbisa. bhora, pamwe chete kuSpanish uye emoji. Ingobvisa iyo yeChirungu keyboard). Yakaita senzira yekumisikidza nekukurumidza kana iwe uchitanga iyo iPhone, asi ipapo unogona kuzvichinja uye iwe hauna chaunoona chero chinhu.
Ndatenda kwazvo Pablo, ndakamboedza uye handina kuona shanduko, iyo App Store inosangana neid yangu, ndine nhau asi nezvinhu zvandiri kuda, zvakanaka !!
Ndatenda zvikuru, kwaziso!
Iyo NEWS icon haina kuoneka ichitevera aya matanho (ios9 yazvino beta yakaiswa)
Mhoroi, Enrique. Edza kumanikidza kutangazve (tanga + zorora kusvikira waona apuro).
Jonny Palazuelos akadaro
Ini ndaita zvese sezvazviri, ini ndinowana iyo Apple News application, dambudziko nderekuti pandinoda kuwedzera peji kubva ku safari kuenda kuApple News, ini handiwane chero mazano?
Pindura kuna Jonny Palazuelos
Hi Jonny. Kune mamwe mawebhusaiti anokundikana. Unogona kuedza kutsvaga zita rewebhu padhuze neRSS kana FEED. Dzimwe nguva kubata icon iyo orenji sedivi rewifi chiratidzo (rss) inowedzerwa zvakananga.
Ndeapi maapps ekuwedzera?
Mario boccaccio akadaro
Mhoroi, Pablo. Ndine yangu iPad 2 ine beta vhezheni yeIOS9 asi haina maapplication enhau. Nhau hadzishande pane iPad 2? Kutenda pamberi uye kukwazisa kubva kuPanama.
Pindura kuna Mario Boccaccio
Mhoro Mario. Havana kana chavakataura nezvazvo kusingaenderane neiyo iPad 2. Wakaisa dunhu kuUnited States uye wakamanikidza kuitazve?
Kuti rishande, unofanira kutanga waona iyo desktop desktop.
Mhoro Sergio. Chinyorwa chakanaka chandakarasikirwa (ini ndinogara ndichichiisa mu desktop modhi -kana ikasawana yoga-) Ini ndinowedzera.
Mhoroi, ini ndatowedzera ActualidadiPhone asi nhau dzinotaridza kwandiri ndedzemavhiki maviri apfuura, ndogadzirisa sei iko kukanganisa? Kana uchida, ndinokutumira skrini kuti ndibatsire.
Pindura kuna Augusto
Mhoroi, Augusto. Pachokwadi ini handizive. Ndine dambudziko rakafanana pane mamwe mablog. Edza kuremadza Nhau syncing neICloud kuti uone kana uchizvigadzirisa.
Zvakadaro zvimwe chete. Nhau dzazvino hadzibudi
Mhoroi zvakare, Augusto. Zvinondishandira, asi vamwe vanonditadza. Pamwe vanofanira kugadzirisa chimwe chinhu muapp.
Zvakanaka ndatenda. Ini ndichamirira kuti mabhugi agadziriswe mushure mezvose iri beta. Hahaha atotarisira mberi kune iyo nyowani iOS 9 uye OS X El Capitan. Ndinovimba ndinomirira iyo iOS 9 Wave Wallpaper yaive yakanaka asi ivo vakaibvisa.
Kudzokorora kweMilanese Loop yeApple Watch
Microsoft inotangisa shanduro yekushandura mumitauro makumi mashanu